Qalabka farsamada TradingView: qalab badan, faaiido badan | vfxAlert official blog
Qalabka farsamada ee barxadda TradingView: qalab badan, faaiido badan
Qalabka falanqaynta farsamada aasaasiga ah ayaa sii wadaya inay noqdaan kuwo faa'iido leh xitaa marka ganacsiga isdabajoogga sare (HFT) uu la wareegay inta badan suuqa. Dilaaliintu kuma deg degeen inay ballaariyaan liiska qalabka; raadinta fikradaha cusub ee ku saabsan sida lacag looga helo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah, waa inaad isticmaashaa barnaamijyo dheeri ah.
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah vfxAlert wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku xirto dallaal kasta. Qalab qalab ah ayaa sida caadiga ah sidan oo kale ah:
Waxaa jira nooc aasaasi ah oo tilmaamayaal ah iyo waxyaabo garaaf ah, waxaad bilaabi kartaa ganacsiga. Mid cusub kuma dari kartid xitaa haddii ay aad uga faa'iido badan tahay "classics". Hadda aan u wareegno jaantusyada gundhigga ka ah meheradda caanka ah ee TradingView:
Tilmaamo badan oo aan caadi ahayn, qaababka jaantuska, khadadka iyo hantida ganacsiga. Uma baahnid inaad ka baxdo vfxAlert. Aan aragno sida ay u shaqeyso.
Mabda'a aasaasiga ah ee istiraatiijiyadda: waxay falanqeyneysaa suuqa iyadoo la adeegsanayo tilmaamayaasha TradingView, kaliya waxay ku fureysaa heshiis dallaal.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaamood oo farsamo ah oo aan lagu darin aasaasiga aasaasiga ah ee ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah :
• Hull Moving Celceliska (HMA) oo leh 15 xilli oo ah M1 (soon) iyo M5 (gaabis ah) jadwalka waqtiga. Qoraagu waa ganacsade reer Australia ah Alan Hull, oo soo jeediyay in la yareeyo dib u dhaca iyadoo la adeegsanayo halkii qiimaha dhabta ah ee muddada muddada xididkeedu laba jibbaaran yahay. Maaddaama celceliska saldhiggu noqon doono WMA, nidaamkeeda culeysku wuxuu ku darayaa saxmooyinka calaamadaha binary.
• Tilmaanta Xoogga Odayga (EFI) . Wuxuu cabiraa awooda ka dambeysa dhaqdhaqaaqa qiimaha iyadoo la adeegsanayo qiime iyo mug. Tilmaamaha ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu aqoonsado dib u soo noqoshada iman karta iyo sixitaanka qiimaha. EFI waa oscillator oo isbedbeddela inta udhaxeysa qiyamka togan iyo kuwa taban, ee kore iyo ka hooseeya Sayniska Zero.
• Xulashada Wicitaanka. Qiimaha iyo "dhakhso" HMA iskutallaab "mid gaabis ah" mid ka hooseeya xagga hoose, Tusaha Xoogga Waayeelka ayaa ka sarreeya heerarka eber.
• Dooro-doorbid. Xaaladaha iska soo horjeedda: qiimaha iyo "dhakhsaha badan" HMA wuxuu ka gudbaa midka "gaabis ah" kor ilaa hoos, Tilmaanta Xoogga Waayeelka ayaa ka hooseysa eber.
• Ganacsato khibrad leh ayaa furi kara fursadaha HMA (15, 5). Newbie kaliya baayacmushtarka HMA!
• Natiijooyinka xisaabinta HMA waxay ka sarreysaa celceliska qiimaha qiimaha waxayna aad ugu dhow yihiin shaxanka ku jira waqti-yar yar, taas oo kordhinaysa tirada calaamadaha binary ee bilaashka ah. MA waa inaysan sidan u shaqeyn xitaa haddii wax walba ay ku wanaagsan yihiin xogta taariikheed - haddii ay jirto is-dhexgal aad u dhow "kordhinta tirada xilliyada;
• Waxaan la soconaa barxadda ganacsiga laba-geesoodka ah ee sii-deynta wararka aasaasiga ah ee muhiimka ah iyo tirakoobka. Ma fureyno ikhtiyaarka isla marka daabacaadda kadib, oo, haddii ay suurtagal tahay, xirno macaamilkan hadda jira 15-20 daqiiqo kahor daabacaadda;
• Haddii dallaalku uu suurta galiyo in la xiro ikhtiyaarka ka hor inta uusan dhicin, waan qabannaa (xitaa haddii faa'iido tahay!) Marka ay soo ifbaxdo calaamado ka soo horjeedda
Aan soo koobno. Qalabka boosteejada TradingView wuxuu bixiyaa fursad dheeri ah oo lagu helo calaamado badan oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh. Had iyo jeer raadso wax cusub, ka dibna waxaad mar walba ka hor mari doontaa ganacsatada kale.